अनुपको ‘पुरानो बुलेट’मा बर्षा र माला बस्ने « Ramailo छ
अनुपको ‘पुरानो बुलेट’मा बर्षा र माला बस्ने
प्रकाशित मिति : Jun 21, 2018
समय : 5:36 pm
फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ को औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको छ । फिल्ममा नायक अनुप विक्रम शाही, नायिकाद्वय वर्षा सिवाकोटी र माला लिम्बुको प्रमुख भूमिका रहनेछ । फिल्म निर्देशन भिषण राईले गर्दैछन् । उनले लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आइरहेका छन् ।
क्रेजी इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने पुरानो बुलेटमा कुमार राई, दीपेन्द्र लिम्बु, विरेन साम्बा र टिकाराम राईले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नेछन् । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा सन्तोष राई छन् । फिल्ममा कविता आले, शिव मुखिया, कृष्ण भक्त महर्जन, शिरोमणी दवाडी, दिवज राई लगायतका कलाकारहरुकोे पनि अभिनय रहनेछ ।
हरि घले लामाको छायांकन, उत्तम जंग लिम्बु र जयन जे. वाइवाकोे संगीत, राजेशपायल राई, मेलिना राई, जयन जे. वाइवा र उत्तम जंग लिम्बुको गायन रहनेछ । फिल्मको कोरियोग्राफर पशसान्त तामाङले गर्नेछन् ।
फिल्मको छायांकन यही असार १५ गतेबाट सुरु हुनेछ । पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुमा ‘पुरानो बुलेट’ को छायांकन हुने निर्देशक भीषण राईले बिहिबार आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा बताए । आउँदो मंसिरसम्म फिल्म प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य छ ।